HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Garifuna Grika Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luo Macua Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mixe (Afovoany) Mizo Mooré Myama Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele (Zimbabwe) Ngabere Norvezianina Nzema Ossète Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa (Shanghaï) Sinoa (Yunnan) Sinoa Kantôney Notsorina Sinoa Sichuan Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tatar Tigrigna Tiorka Tok Pisin Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Tuvalu Twi Tzotzil Uruund Vietnamianina Wayuunaiki Xhosa Yorobà Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa Éwé
Mety tsy te hitoky amin’ny fivavahana intsony ianao, raha nisy fivavahana nandiso fanantenana anao. Misy fivavahana azo itokisana anefa. Nampianatra ny mpanara-dia azy hampihatra ny fitsipik’Andriamanitra i Jesosy, fony izy teto an-tany. Misy foana hatramin’izao ny olona tena manara-dia an’i Kristy, ka miezaka mampihatra ny fitsipika kristianina eo amin’ny fiainany. Aiza no ahitana olona toy izany?
Hoy i Lafatra, ilay noresahina teo aloha: “Afaka nianatra Baiboly ihany aho, satria nisy Vavolombelon’i Jehovah nampianatra ahy. Tsy ela dia azoko ny tian’ny Jaona 8:32 holazaina tamin’ny hoe: ‘Ho fantatrareo ny marina, ary ny marina hanafaka anareo.’ ”
Hoy i Robert, ilay voaresaka teo aloha: “Nony nianatra Baiboly tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah aho dia lasa fantatro fa tsy avy amin’Andriamanitra ny fijaliana. Misy antony matoa mbola avelany hisy ny ratsy. Faly anefa aho nahalala hoe kely sisa dia hesoriny izany.”
Tsy mora ny manao ny tsara, rehefa tsy manao izany ny ankamaroan’ny olona. Tena azo atao anefa izany. Maro no te hahatakatra sy hampihatra izay lazain’ny Baiboly, ka mitady fanampiana. Izany no mahatonga ny Vavolombelon’i Jehovah eran-tany hampianatra olona an-tapitrisany maimaim-poana. Olona maro, isan-kerinandro, no mianatra izay tena ampianarin’ny Baiboly, ka lasa mifandray akaiky amin’ny Mpamorona sy sambatra kokoa. *
Nahoana raha anontanianao ny Vavolombelon’i Jehovah hoe nahoana izy no mitoky amin’ny fivavahany?
Raha mihaona amin’ny Vavolombelon’i Jehovah àry ianao amin’ny manaraka, dia anontanio izy hoe nahoana izy no mitoky amin’ny fivavahany. Fantaro ny zavatra ampianariny ary hadihadio raha manaraka ny fitsipika kristianina izy ireo eo amin’ny fiainany. Ho hitanao amin’izay raha misy tokoa izany fivavahana azonao itokisana izany.
^ feh. 5 Raha mila fanazavana fanampiny, dia jereo ny boky Inona Marina no Ampianarin’ny Baiboly?, navoakan’ny Vavolombelon’i Jehovah.
Nahoana no Ilaina ny Mianatra Baiboly?
Mety hieritreritra ianao hoe: ‘Tsy manam-potoana amin’izany aho’, na hoe: ‘Sao dia tafiditra lalina amin’izany eo aho?’
Hizara Hizara Misy Fivavahana Azo Itokisana Ve?